Simba reData: Masangano Anotungamira Anowedzera sei Dhata SeKukwikwidza Kunobatsira | Martech Zone
Data ndiyo yazvino uye yeramangwana sosi yemakwikwi mukana.
Borja Gonzáles del Regueral - Mutevedzeri weDean, IE University Chikoro cheHuman Sayenzi neTekinoroji.
Vatungamiri vebhizinesi vanonyatsonzwisisa kukosha kwedata sechinhu chakakosha pakukura kwebhizinesi ravo. Kunyange zvazvo vakawanda vakaziva kukosha kwayo, vakawanda vavo vachiri kunetseka kunzwisisa sei inogona kushandiswa kuwana zvakavandudzwa zvebhizinesi, sekushandura tarisiro yakawanda kuva vatengi, kusimudzira mukurumbira wemhando, kana kuwana mukana wekukwikwidza muindasitiri kune vamwe vatambi.
Kukwikwidza kwemaindasitiri kunogona kutorwa nezvinhu zvakawanda. Asi zvakaonekwa kuti zvizhinji zvezvinhu izvi zvinogona kudzorwa uye kushandiswa nekuunganidza nekuongorora data. Muchinyorwa chino, tichadzidza zvinhu zvinopesvedzera kukwikwidza kwekambani muindasitiri, uye kuti data resangano rinogona kubatsira sei mukuvandudza kukwikwidza.
Vanokwikwidza Vanokwikwidza neData Initiatives
Munguva yazvino, vatengi vane runyorwa rurefu rwesarudzo dzekusarudza kubva pavanenge vachitsvaga chigadzirwa kana sevhisi. Kuunganidzwa kwedata uye analytics kunogona kubatsira zvakanyanya sangano kuzvimisa semutambi anosiyanisa pamusika.
Ngatiendei pamusoro pezvinhu zvitatu zvepamusoro zvinopesvedzera kusarudzwa kwemutengi tichitarisa kuti kuunganidzwa kwedata uye ongororo ingavandudza sei kukwezva kwechiratidzo kurwisa vamwe vakwikwidzi pamusika.
Chinhu chekutanga: Kudiwa kwemusika kunosangana nekupa chigadzirwa
Chigadzirwa chakasiyana nemaitiro uye hunhu hunochisiyanisa kubva kumakwikwi acho. Kana iwe ukatengesa chigadzirwa chimwe chete nevakwikwidzi, pasina imwe yakasarudzika kukosha, pane mukana wakakura wekuti vakwikwidzi vako vanogona kukwezva vatengi vakawanda ne-value-yakawedzerwa zvinopihwa. Kufanotaura maitiro evatengi uye kunzwisisa zvavanoda idanho rakakosha rekuwana makwikwi emusika.
Data initiative to kufanotaura maitiro evatengi
Pane imwe pateni kuseri kuri kutengwa nevatengi mumusika uye kuti ndeapi maficha avari kutsvaga pavanenge vachiita sarudzo yekutenga. Unogona kuongorora musika data kuti unzwisise:
Ndezvipi zvigadzirwa zvinowanikwa zvakanyanya kutariswa kubva kune vatengi?
Ndezvipi zvinodiwa nevatengi vanozadzisa nekutenga kwavo?
Ndezvipi zvigadzirwa zvinowanzotengwa nevatengi pamwechete?
Chinhu 2: Competitive Strategic Vision
Izvo zvakakosha kuti ugare uchiziva nezvemakwikwi nemafambiro avo ehurongwa kuitira kuti iwe ugone kukwikwidza kurongedza sarudzo dzako zvakare. Kungave kukwidziridzwa, kuderedzwa, kana kungwara kwemitengo, zvakakosha kupinza ruzivo urwu kubva kune data rakapfuura, pane kutevedzera ura.
Data initiative ye makwikwi ekuita sarudzo
Data analytics inogona kukubatsira kuti unzwisise kukwikwidza zviri nani maererano ne:
Ndezvipi zvirongwa zvekusimudzira uye kuderedzwa kunopa vamwe vakwikwidzi vanopa?
Ndezvipi zvinhu zviri kukanganisa mitengo yevakwikwidzi vako?
Makasitoma emukwikwidzi wako anogutsikana zvakadii nekutenga kwavo?
Chinhu chechitatu: Kuvandudzwa kweChigadzirwa Kuwanikwa uye Kuwanikwa
Vatengi mazuva ano vanotarisira kukurumidza kuburitswa kwechigadzirwa, pamwe neyakatsetseka omnichannel ruzivo. Nekuda kweizvi, mabhureki anofanirwa kuve nechokwadi chekuti zvinyorwa zvawo zvakazadzwa nehuwandu hwakakodzera uye mhando dzezvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa pamusika. Saizvozvo, kushambadzira chigadzirwa ruzivo nenzira kwayo, uye kugonesa vatengi kuwana uye kuodha izvo zvakafanana zvigadzirwa kubva online pamwe nemu-muchitoro chiteshi kwakakosha.
Data initiative to kuwedzera kuwanikwa kwechigadzirwa uye kuwanikwa
Data analytics inogona kukubatsira kupindura mibvunzo yakadai se:
Ndeapi maperesenti ekutengesa muchitoro kana zvichienzaniswa nepamhepo?
Ndedzipi nzvimbo dzinonyanyozivikanwa dzekutumira zvigadzirwa?
Ko vatengi vari kuverenga kupi nezve zvigadzirwa / masevhisi ako?
Simba re zvakachena Data
Pamibvunzo yese yaratidzwa pamusoro, unogona kufungidzira mhinduro kwavari kuburikidza nenjere, kana kushandisa data rakavimbika, rakavimbika rekare uye kuita sarudzo dzakaverengerwa dzemangwana. Asi zvakati omei kupfuura izvi. Dhata rinounganidzwa nekuchengetwa nemasangano mazhinji harisi mugwara uye rakarurama kuti rishandiswe pakuongorora, uye rinofanirwa kuiswa pasi pehupenyu hwekutarisira data risati rashandiswa nekuda kwezvikonzero zvakadaro.
Hupenyu hwemhando yedata hunotora data rako kuburikidza nematanho akatevedzana kuti uve nechokwadi chekushandisa data uye huroyi, sekubatanidza data, kunyora, kukwesha, kuchenesa, kubvisa, nekubatanidza. Zvishandiso zvemhando yedata zvekuzvishandira zvaita kuti zvive nyore kuita otomatiki emhando yedhata manejimendi nenguva yakaderedzwa, mutengo, uye yekudyara kwevashandi. Kugadzirisa mhando yedata munguva inogona kugonesa chaiyo-nguva kuverenga kwemakwikwi matanho, akadai sezvinodiwa pamusika, zvinodiwa nevatengi, mitengo uye kukwidziridzwa, uye kuwanikwa kwechigadzirwa, nezvimwe.
Tags: yakachena datacompetitive advantagenzira yemakwikwiDatadata analyticskuchenesa datamanera e datadata kufanotaurakufanotaura maitiro evatengikuwanikwa kwechigadzirwakuwanikwa kwechigadzirwazvigadzirwa zvinopihwanzira